Wax Badan Ka Barro Sida Loola Dagaalamo Finanka Wejigaaga Foolxumeeyay.. - Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Wax Badan Ka Barro Sida Loola Dagaalamo Finanka Wejigaaga Foolxumeeyay..
Published: January 10, 2017, 6:09 pm
finanka waxaay dhaawici karaan kalsoonideena. Oo ma ahan mid khuseysa bilic sanaan teena oo kaliya, waxay calaamad u noqon kartaa xaalado caafimaad.
Waxaana ku hareeree san nahay kiimikooyin, sun, iyo wasakh badan oo khalkhal ku keeni kara hormoonadeena. Ka fogoow dufanka, sonkorta badan, waxyaabaha lagu daray ama ka sameysan caanaha, qaxwaha. Isticmaal dufanka wanaagsan sida afagaadhada, lowska.
Aashitada caloosha oo yar waxaa lala xidhiidhiyaa finanka. Hadii ay aashitadu yar tahay, si fiican uma burburin karto cunnada, sidaa darteed jidhkaagu ma heli karo nafaqada uu u baahan yahay. Cab biyo lagu daray liin dhanaan ama khalka tufaaxa.
Isku dheeli tirnaanta bakteeriyada fiican hadii ay meesha ka baxdo waxay horseedi kartaa caabuq raaga iyo finan. Hadii aad tahay dadka isticmaala kaniinka qalajiyaha, ogoo wuxuu dilaa bakteeriyada fiican iyo tan xunba.
Shiid khudaarta iyo midhaha
Fiitamiinada iyo macdanada ku jira khudaarta cagaaran iyo midhaha sida tufaaxa iyo muuska, waa kuwo caawin kara in maqaarka uu wanaag sanaado. Sida ugu dhakhsiyaha badan ee looga soo saari karo fitamiinada iyo macdanta waa in la shiido
Madho biyo lagu daray liin maqaarka xiliga fiidkii. Kadib maydh 20 daqiiqo kadib adigoo isticmaalaya biyo diiran.
One Comment : Wax Badan Ka Barro Sida Loola Dagaalamo Finanka Wejigaaga Foolxumeeyay..
sadiyo abdi says:
asc waa mahadsanttihiin walal dhamaan shaqalaha kobciye waxaan fahmin dacarta waxa loola jeedo liinta dhanaan ka waan aqanaa lakin dacar manan fahmin thanks